Maalinta: Juun 11, 2018
Qoraal-hawleedka hawlaha Edirne ee AK Parti, Halkalı - Waxaa la sheegay in qandaraaska dhismaha ee Mashruuca Xawaaraha Sare ee Kapıkule loo qorsheeyay in lagu bilaabo 2018. Waxaa la sheegay in wadada ka bilaabaysa Kapıkule ay gaari doonto Baku. Hadalada soo socda [More ...]
Bursa-Otteli High Speed ​​Train Line ayaa waxaa dhisi doona Bayburt Construction
In kasta oo… Disembar 2012, dhismaha kaabayaasha ayaa ka bilaabmay qaybta Bursa-Yenişehir ee tareenka xawaaraha sare leh oo lagu aasaasay albaabka Balat, iyo hindisada oo sii socota sababtoo ah dhammaystirka kaalmada koowaad ee tunelada. Laakiin… Indhaha 3 bishii Abriil [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, Banaz-Izmir khadka tareenka xawaare sare ku socda ee u dhexeeya daraasadaha socda ee daraasadaha, ka dib wuxuu ka qeybgalay barnaamijka Iftar ee lagu qabtay Izmir. Maareeyaha guud Apaydın marka hore, inta u dhaxaysa Usak-Banaz soon [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, 08-09 June 2018 taariikhi ah, Ankara-Izmir YHT Mashruuca Mashruuca Dhismaha Emidag iyo Afyonkarahisar-Banaz, Banaz-Eşme iyo Eşme-Salihli ee daraasadda goobta ayaa baaray, waxay ka heleen macluumaad ka yimid mas'uuliyiinta. Guud ee Apaydın [More ...]
Xiriirka kubadda cagta ee xawaaladda ee Antalya-Denizli-Izmir oo joojinaysa 2023
Madaxweyne Erdoğan, Denizli oo ah mudaaharaad lagu qabtay shalay magaalada Denizli ayaa shacabka Denizli ay siinayaan warka wanaagsan ee tareenka xawaaraha sare ee Antalya-Burdur-Denizli-Aydin-Izmir. AK Party iyo Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu dambeyntii siiyay war wanaagsan oo tareenka xawaaraha sare ah Denizli. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın-İzmir tareenka xawaare sare ku socda [More ...]
Madaxweyne Ku Xigeenka Akkaray
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Magaalada Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu ayaa la safray Akçaray, oo uu si weyn ugu adeegsaday danta iyo qadarinta muwaadiniinta. Baska Baska İzmit [More ...]
Guddoomiyaha BCCI Ibrahim Burkay, Turkey, ayaa sheegay in inkasta oo dhan dhibaatooyinka iyo caqabadaha sii waday in ay ka mid ah dhaqaalaha ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya ee adduunka ahaan, "iyo inta awood wax soo saarka wadaniga ah ee qaran [More ...]
Saldhigga Rakaabka ee Rakaabka ee Jasiiradda İzmir
Shay bir ah oo laga soo xerooda meesha laamiga ah ee ay leedahay Shirkadda Yapıray oo lagu qaaday tareen xamuul oo ay leedahay shirkadda TCDD Taşımacılık A.Ş. Gaadiidka dhulka hoose ee habka tareenka ee İzmir [More ...]
Xiritaanka iskuulada, fasaxa xagaaga iyo cufnaanta rakaabka ka hor inta aan la gaarin Ramadaanka Ramadaan, Xarunta Ankara ee Xarunta u Dhaxeysa (AŞTİ) waxay kordhisay muhiimadda amniga. Awoodda rakaabka maalinlaha ah ee AŞTİ [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay ogaatay mashaariicda fududeyn doonta taraafikada magaalada mid mid. Isgoysyada laga sameeyay gaar ahaan wadooyinka isku xirka wadooyinka waxay ka dhigaan qulqulka gawaarida waxayna ka hortagaan culeyska taraafikada ee magaalooyinka. Qodobbada muhiimka ah ee magaalada [More ...]
Agaasinka Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli ee Waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Gaadiidka Badda 2018 jadwalka xilliga xagaaga 18 June 2018 ayaa bilaabanaya Isniinta. 8 maalinle ah ee gaadiidka badda badda Kocaeli oo leh duulimaadyo dheeraad ah [More ...]
Minibus iyo taraam ayaa isku dhacay 1
Dadka 1 ayaa ku dhaawacmay shilka ka dhacay xarunta tareenka İldem ee degmada Kayseri Melikgazi. Marka loo eego macluumaadka la helay, Kayseri Melikgazi Ildem 4 Kayseray joojinta dhacdada ayaa dhacday 38 VV 527 [More ...]